Ụbọchị: 6 August 2019
CevizliIgwe mmiri na-akụ mmiri ahụ na Osisi vaịn
CevizliUbi vaịn nke dị n'akụkụ ọdụ ụgbọ mmiri Topkapi kụrụ tram. N'agbanyeghị na ọ nweghị mmerụ ahụ, Bağcılar-Cevizliubi vaịn na Topkapi-Kabatas njem laghachiri na nkịtị mgbe oge 45 gasịrị. Stopszọ ụgbọ okporo ụzọ abụọ kwụsịrị n’ihi ihe ọghọm, ndị otu ahụike bịara ebe ahụ, Istanbul [More ...]
Nzọụkwụ mbụ maka Linegbọelu Ọdụ Catgbọelu Istanbul Catalca
3 enweghi ike ibute metro. Railgbọ okporo ígwè 26 km dị n’etiti Çatalca na Arnavutköy dị na atụmatụ ibugara ọdụ ụgbọ elu site n'ọdụ ụgbọ elu. Akwụ ụgwọ 2 ijeri 627 nde 600 puku TL gbakọrọ dị ka “3. Ügbọ elu Müselles-Çatalca [More ...]
Nkọwapụta Nchịkwa Ọsọ ụgbọelu nke Bursa Bilecik nke Erdoğan
Turkey akụkọ ihe mere eme, ndị kasị ibu ego 426 kilometa Istanbul-Izmir atuliri atuli nke Prime Minister Recep Tayyip Erdogan anamde oghere, ebe a na okwu ya, Bursa - Bilecik-ekwu banyere elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè ọrụ. Erdogan, oru ngo a ga edozi edozi nsogbu ndị a kọrọ. Onye isi ala Erdoğan, Bursa [More ...]
Ministry of Transport 114 Nde 406 ሺህ TL Nri n'ime afọ atọ gara aga
Dabere na nzaghachi sitere n'aka CHP Tanrıkulu, onye rịọrọ maka ịzụta ihe nri nke oflọ Ọrụ na Ntinye ihe n'ime afọ atọ gara aga, Ministri ahụ zụtara nde 2016 nde 2019 puku TL n'etiti afọ 114-406. A kọwaghị ụlọ ọrụ ndị enyere ndị ọrụ nri aka [More ...]
Ụlọ ọrụ na Technology Minister Mustafa Varank, Turkey si Automobile Enterprise Group (TOGG) sonyeere Board of Directors nzute. Minista Varank gosipụtara ihe atụ atọ nwere ọrụ nke ụgbọ ala. TOGG President Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter akaụntụ, Turkey si Automobile Enterprise Group Board of Directors [More ...]
Onye isi oche TCDD General Ali İhsan Uygun bu akporo “Railway Artists Enchanting ısında biputara na mbipụta August nke akwukwo Raillife. Mpempe akwụkwọ TCDD GENERAL MANAGER UYGUN Na ntinye ego emere n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ụzọ ụgbọ oloko anyị na-eto ma na-etokwa. N'ihi mmepe ndị a, obodo anyị [More ...]
Ga-adọkpụ ahia-aga Turkey
Transport na Infrastructure Minister Mehmet Cahit Turhan na August ọnụ ọgụgụ nke Raillif magazine "Turkey ga-a ụzọ nke ahia adọkpụ isiokwu bụ" e bipụtara. Minista okwu na Turhan iru eru ka Turkey malite Kazakhstan na Azerbaijan si China ma si n'ebe [More ...]
Uygun gara ebe a na-ewu Gaziray Project
Onye isi nchịkwa TCDD Ali İhsan Uygun natara ozi n'aka ndị isi banyere ọrụ ụgbọ okporo ígwè na Gaziantep na ọnọdụ ọhụụ nke Gaziray Project Uygun gara Gọvanọ nke Gaziantep, Davut Gül n'ọfịs ya. Uygun na Gul, ọrụ okporo ụzọ dị na Gaziantep [More ...]
A ga-enweta Razmir Light Rail System Project Construction Consultancy Service
Na-ezute ọtụtụ ihe dị mkpa na njem nke ndị isi obodo, EGO General Directorate butere afọ ojuju ụmụ amaala na mmụba n'ọhịa maka ụgbọ ala na ndị ọkwọ ụgbọ ala iji mee ka ọrụ ha na-abawanye nke ọha. Na-enyocha odide nke ụgbọ njem ọha kwa ụbọchị [More ...]
Turkey Mountain Bike Championship ume e bee
One of Turkey kasị oge a na ịgba ígwè ụlọ ọrụ na Sunflower Valley Bicycle MTB Supreme Isi nke Sakarya-Turkey abuana ke Championship, "World Mountain Bike World 2020 ga-ọhụụ ga-nọrọ n'ụlọ ndị Championship. Na Septemba nke 2020 n'okpuru nkwado nke Onye isi ala anyị [More ...]
Obodo Kocaeli na-aga n'ihu na-emejuputa atumatu dị iche iche iji wepụta ụgbọ njem dị mfe ma dị mma n'akụkụ niile nke obodo. Roadszọ ọhụụ na-eme ka okporo ụzọ dịkwuo mfe, ebe ụzọ ọzọ na-eme njem na-eme ka ụmụ amaala nwee ntụsara ahụ. N'ihi ya, na Çayırova [More ...]
Salim Dervisoglu Street, 3. Ighapu Asphalt mbụ na Etap
Ijeri 6 nke 376 Ndi 288 Ndi 2 Nde gafere na Kocaeli Terminal
Kocaeli Intercity Bus Terminal, nke bụ ụtụ nke Kocaeli Metropolitan Obodo na-arụ ọrụ kemgbe Mee 2017, ma hazie ndị mmadụ ruru nde 6. 2019 nde 1 puku ndị ọbịa 734 ọbịa na ọkara nke mbụ nke 854 [More ...]
Taa na History: 6 August 1968 Eskişehir Railroad
6 August 1968 Eskişehir Railroad Factory malitere ịmepụta ụlọ obibi ụlọ taa.